Izay ho avoakan’ny anio no mbola ankamantatra fa raha ny omaly aloha dia mijanona tamin’ilay fanambarana nataon’izy ireo ny antoandro ihany ny an’ireo manamboninahitra vitsivitsy nilaza fa « mitantana vonjimaika ny raharaham-pirenena ».
« Rava manomboka izao ny andrim-panjakana rehetra misy ary ny komity miaramila ho fanavotam-pirenena no mitantana vonjimaika ny raharaham-pirenena », hoy ny fanambrana novakian’ny lietnà-kolonely Charles Andrianasoavina, izay isan’ny nitarika ny « fikomiana » tao amin’ny toby miaramila Capsat ny volana marsa 2009, ka nanafaingana ny fitondrana Ravalomanana.
Tsy nisy akony firy hatramin’ny alina anefa izay fanambarana nataon’izy ireo izay na dia teo ihany koa aza ny antso naton’izy ireo ho an’ireo miaramila mba hanatevin-daharana azy ireo.
Tsy mihoatra ny 20 hatreto ireo manamboninahitra jeneraly sy manamboninahitra ambony milaza ny handray ny fahefana ireto. Mamahatra eny amin’ny Bani Ivato izy ireo hatreto.
Isan’ireto manamboninahitra mikomy ireto ny jeneraly Noël Rakotonandrasana, minisitry ny Foloalindahy tao anatin’ny Fahefana avon’ny tetezamita, ary nanohana mafy an’i Andry Rajoelina ihany koa tany am-piandohana, ny jeneraly Raoelina, akaiky an’i Marc Ravalomanana ary isan’ireo voampanga amin’ilay raharaha 7 febroary teny Ambohitsorohitra. Voamarika manokana ihany koa ny kolonely Coutiti Assolant, mpanohana ny Amiraly Ratsiraka.
Tsy voafaritra mazava kosa hatreto izay tena isan’ireo miaramila voatarik’izy ireo.
Ny Praiminisitra Camille Vital teny Mahazoarivo tokony ho tamin’ny 5 ora no niezaka nampitony ny rehetra nanoloana ity fikasana hanongam-panjakana ity, nilaza fa « efa nandray ny andraikiny ny tompon’andraikitra rehetra ». « Fomba entina hanakorontanana ny saim-bahoaka fotsiny ihany no nisy », raha ny nambarany.
Ny hariva tamin’ny 7 ora latsaka tany dia ninia nidina teny amin’ny birao fandatsaham-bato teny Ambatobe izay nalefany ny adidiny ny maraina ny Filohan’ny Fahefana avon’ny tetezamita, nanaporofo fa mbola mijoro ny fitondrana tetezamita.
« Mijoro ny fitondrana tetezamita ary mijoro koa ny governemanta », hoy izy.
Nanasokajy ilay fikasana hanongam-panjakana ho « nahatsikaiky », ihany aza i Andry Rajoelina. « Tsy hitondra mankaiza ireny ary tsy hitondra mankaiza ireny ary tsy hitondra amin’ny fitoniana sy ny filaminana », araka ny nambarany.
Ny azo antoka aloha dia hivoatra haingana ity raharaha ity ary efa nampanantenaina rahateo ny Filohan’ny Fahefana avon’ny tetezamita fa « tsy hijanona fotsiny amin’izao ny mpitantana ».